Dadweynaha Somaliland oo ku Diirsaday Awaamiirtii ka soo Baxay Shirkii Kowaad ee Golaha Wasiirrada Xukuumadda Cusub
Hargeysa(Dawan)- Ra’yul-caamka Bulshada Somaliland, ayaa si weyn u soo dhaweeyey go’aankii u horreeyay ee ka soo baxay shirkii kowaad ee ay Sabtidii yeesheen Golaha cusub ee Wasiirrada xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay ka soo baxeen qaraar shacbiga naruuro geliyay oo toddoba qoddob ka koobnaa.
Shirkaas oo uu guddoominayey Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi, waxa uu amarro culus dul-dhigay wasiirradiisa, waxaanu faray awaamiir uu kor ugu qaadayo haybada dawladnimo oo uu doonayo inay dhaqan u noqoto adeegeyaashiisa ka saacidaya waajibaadka uu qaranka u hayo.
Dadweynuhu waxay madaxweynaha ku bogaadiyeen talaabada lagu diwaangelinayo hantida wasiirrada xilalka loo dhiibay ay haystaan xiligan , si ay mustaqbalka u fududaato in la baadhi karo, haddii ay dhacdo in looga shakiyo inay ku tagri-faleen hantidii ummadda ee ay masuulka ka ahaayeen. Qodobkaasi waxay dadweynuhu u arkeen inuu hordhac u yahay fulinta balanqaadkii madaxweynuhu ku galay ololihii doorashada madaxtooyada ee la xidhiidhay inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa.
Waxa kaloo bulshada soo jiitay qodob kale oo la xidhiidhay inaanay wasiirradu ka qaybgali karin shirarka qabaa’ilka oo ahayd caado taban oo dawladnimada Somaliland nusqaan weyn ku ahayd rubuq-qarnigii la soo dhaafay.
Khuburrada dhaqaalaha yamxeerisa, ayaa la dhacsan in madaxweynaha cusubi uu soo afjaray xafladihii xilalka lagu kala tirsan jiray Huteelada waaweyn, oo ay ku bixi jirtay lacag xad dhaaf ah oo laga baaqsan karay. Madaxweynuhu wuxuu soo nooleeyey sunihii ahaa in xafladaha xil wareejintu ay ka dhacaan goobaha shaqada oo kaliya.
Waxa madaxweyne Muuse Biixi lagu ammaanay inuu muddadii yar ee uu xilka hayay uu aad u adkeeyay sirtii dawladda, taasina ay meesha ka saartay in go’aamadiisu dibadda u baxaan, ka hor inta aanu ku dhawaaqin. Waxaanu golihiisa wasiirrada ku dhaariyay inay ilaaliyaan sirta golaha iyo ta qarankaba. taageerada bulshadu u muujisay go’aamadani waxay hadhaysay goobaha bulshadu ku kulanto iyo saxaafadda bulshada.
Waxaa dadka siyaasadda la socdaa ay madaxweynaha ku majeerteen inuu bilaabay xoojinta wada shaqeynta wadareed ee golihiisa wasiirrada si ay u wadajir ugu taabogeliyaan himilooyinka uu doonayo inay qaranka ugu adeegaan. Waxa kaloo madaxweynaha looga mahadceliyay inuu ka ka taxadarayo in golihiisa wasiirradu noqdaan qaar ku hirdamaya kala hororsiga danno gaar ah ama kooxeed.
Waxa go’aanka ka soo baxay shirkii u horreeyey ee Wasiirradu noqday mowduuca ugu hadal-haynta badan 48 saacadood ee la soo dhaafay, waxaanay ra’yul caamku ka sinaayeen taageerada ay u muujiyeen 7dii qoddob ee loogu wanqalay dhaarintii golaha cusub ee wasiirrada, waxase jiray dad ku baaqayey in madaxweynuhu uu si joogto ah ugu dhabo-galo sida loo meelmariyay awaamiirtan oo bulshadu u aragtay inay kaalin ka gaysanayaan hannaanka maamul wanaagga ee dawladdu ku taamayso inay waddanka ku dhaqdo shanta sannadood ee fooda innagu soo haya.